Proof of ongoing Genocide in Myanmar | Dr Ko Ko Gyi's Blog
« The Equal Rights Trust (ERT) Launches Situation Report on Rohingya Crisis in Myanmar
Gregory Stanton: The Eight Stages of Genocide »
Tags: Burma, Daw Aung San Suu Kyi, Genocide, Hate speech, Islam, Islam in Burma, Muslim, Myanmar, Myanmar Military, Myanmar Muslims, Rakhine, Rohingya, U Aye Maung, U Thein Sein, USDP
This entry was posted on July 6, 2012 at 9:54 am and is filed under Uncategorized.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.
One Response to “Proof of ongoing Genocide in Myanmar”
July 7, 2012 at 8:14 am | Reply
Source: FB of Kyawmoe Aung
မည်သည့်ဘာသာတရားကမျှ ခွင့်မပြုထားသော မုဒိမ်းမှု ကျုးလွန်ခြင်း၊ လူသတ်ခြင်းများ မှုခင်းဂျာနယ်များတွင် အပတ်စဉ် အမြဲပါ နေသောနိုင်ငံတွင် မွတ်စလင်မ်(ဆိုသူ)က မုဒိမ်းကျင့်ခဲ့သည်ကိုမှ မီဒီယာများအတွင်း ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာတရားအား ထည့်သွင်းဖော်ပြခဲ့သည့်အခါ၊
အဆိုပါ ရာဇဝတ်မှုနှင့် လားလားမျှ ဆက်စပ် ပတ်သက်မှုမရှိသည့် ပြည်မမှ အပြစ်မဲ့ခရီးသည် ၁၀ဦးအား လူအုပ်စုဖြင့် ရက်ရက်စက်စက် အကြမ်းဖက် သတ်ဖြတ်ခဲ့သောအခါ၊
မီးရှို့ခံ ရပ်ကွက်အတွင်းတွင် ရခိုင်အိမ်ဟု ရေးထားသော အိမ်ကမူ ထီးတည်းကြီး မပျက်မစီးဘဲ ကျန်နေကြောင်း တွေ့ရသည့်အခါ၊
မြို့လည်ခေါင် နေ့ခင်းကြောင်တောင် လူသတ်ခဲ့သောအဆိုပါ အကြမ်းဖက်သမား များစွာကို မျက်မြင် သက်သေခံမည့်သူ မရှိဆိုသောအခါ၊
ထိုသို့ တရားဥပဒေမဲ့ ဖြစ်နေကြောင်း ထောက်ပြရေးသားသော မီဒီယာ စာမျက်နှာအတွက် အထက်ပါ စကားလုံးမျိုး သုံးလျက် Comment ရေးသားသည့် ခေတ်သစ် နာဇီဝါဒီများကို တွေ့ရသည့်အခါ၊
ပိုဆိုးသည်က အဆိုပါComment ရေးသားသူ၊ ယင်းကို ကြိုက်နှစ်သက်ကြောင်း like လုပ်သူများသည် Profile များအရ တက္ကသိုလ်ပညာတတ်များ၊ ဘာသာတရားကြီး တစ်ခုကို ကိုယ်စားပြုနေသည့် ပုံအား Profile Picture တင်ထားသူများ၊ နိုင်ငံရပ်ခြားတွင် နေထိုင်နေသူများ၊ NGO လူမှုရေး အဖွဲ့အစည်းကြီးများတွင် လုပ်ကိုင်နေသူ မိခင်စိတ်ရှိ ကရုဏာရှင် မိန်းမသားများ ဖြစ်နေကြကြောင်း သိရသည့်အခါ၊
လူပြောသောဘာသာစကားကို ပြောဆိုရေးသားနေကြခြင်း၊ လူနှင့်တူသော ဓာတ်ပုံ တင်ထားခြင်း၊ လူအမည်များရှိနေခြင်း….. စသည် စသည် အကြောင်းရင်းတို့ကို ထောက်ရှု၍ လူသားစင်စစ်များ ဧကန်အမှန် ဖြစ်တန်ရာ၏ဟု ယူဆထိုက်သူ သုံးဆယ့်တစ်ဘုံသားများ ဤလောကကြီးတွင် မည်မျှ များပြားနေသည်ကို မတွေးရဲရအောင် ဖြစ်နေရပါပြီ။
မေတ္တာတရား၊ သစ္စာတရားတို့ ချုပ်ငြိမ်းကြပြီလား။